अनुहार हैन यो अंग हेरेर थाहा हुन्छ पुरुषहरुको बुद्धिमानी - Internet Khabar
अनुहार हैन यो अंग हेरेर थाहा हुन्छ पुरुषहरुको बुद्धिमानी
October 11, 2017 Internet Khabar Desk
एजेन्सी। पुरुषको चौडा निधारले उनीहरुको बुद्धिमानी दर्शाउने भनिए पनि एक अध्ययनले अर्कै नतिजा ल्याएको छ ।
अमेरिकाको मिसौरीका मनोविज्ञानका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता डा. एकाराकुडी एलियासको ४० वर्षको अनुसन्धानले नयाँ तथ्य पत्ता लागेको हो । डा. एलियासका अनुसार अनुहार होइन पुरुषको छातीका रौंले उनीहरुको बुद्धिमत्ताको संकेत गर्छ । एलियासले आफ्नो अनुसन्धानमा छातीमा धेरै रौं हुने पुरुषहरु बढी बुद्धिमान भएको पाइएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
पेट दुखेर अस्पताल पुगेकी महिलाको शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सक चकित !
डरलाग्दो मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी उछुट्टिए आमा-बाबु, बाईकमै रहे छोरा, त्यसपछि भयो झन् चमत्कार
द्रौपदीले यसकारण गर्नुपरेको थियो पाँच जनासँग विवाह
अचानक करोडपति भयो यो बिरालो, कसरी ?
सेनामा जागिर खाने हो ? आयो यस्तो मौका !
December 11, 2015	 0	हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
सावधान ! यी ७ संकेतमा लुकेको छ गंभिर समस्या, बेवास्ता नगरौ